Shilka Beledweyne: burburka diyaaradda siduu dameer u sababay? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo July 15, 2020 July 16, 2020 Uncategorized
“Shilkaasi in uu dameer sababay waxaa noo xaqiijiyey shaqaalihi diyaaradda saarnaa, ciidamada AMISOM ee garoonka ku sugan iyo duuliyihi diyaaradda saarnaa intaba,” sida uu BBC u xaqiijiyay maamulaha shirkadda diyaaradda Bluebird.
“Annaguna diyaarad ayaan shaqaalihi shirkadda u dirnay xalay fiidki waxayna keentay Nairobi, si caafimaadkooda loo hubiyana waxaa la geeyey isbitaalka Aga Khan oo ku yaalla magalada.
Duuliye Xuseen ayaa yiri: “Ciidamada Jabuuti ee AMISOM ka tirsan waxay inoo sheegeen in ‘aysan dameerka arkin markii ay diyaaradda ku amrayeen in ay soo degto balse markii ay diyaaradda dhulka waxyar uun u jirtay in uu dameerka duurka ka soo baxay’, horayna ay arrima noocani ah u dhaceen inkastoo aysan shil noocaan ah sababin”.
“Duuliyeyaashi diyaaradda iyo ninki ka socday AMISOM seddexdoodaba caafimaadkooda aad buu u wanaagsan yahay wax dhib ahna ma qabaan, waxyna dhakhaatiirta noo xaqiijiyeen in aysan wax dhib ah qabin.”
“Shilka diyaaradeed ee dhacay cidna uma qabsaneyno balse qasaaraha naga soo gaaray shilkaasi waxaan kala tacaamuleynaa shirkadda ceymiska oo ay diyaaradda ku jirtay ama alaabti saarneyd haddey tahay,” ayuu yiri Maareeyaha Guud ee shirkaddaasi diyaaradaha Bluebird Aviation Xuseen Maxamed oo BBC u warramay.
Previous Somaliland oo Mabnuucday Tubaakadda LYFT oo Hore Dalka Loogu Sii Daayay.
Next Gudomiyaha Gobolka Awdal o ka hadlay Muranka dhulka iyo Buuraha